न्यूज सञ्जाल: » किन खानुपर्छ ‘सुपर फुड’ अर्थात् ब्रोकाउली ?
किन खानुपर्छ ‘सुपर फुड’ अर्थात् ब्रोकाउली ?
न्यूज सञ्जाल १९ पुष २०७६, शनिबार ०९:१२
अमेरिकाको ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार, ब्रोकाउलीमा क्यान्सरसँग लड्ने तत्त्व पाइन्छ । त्यो तत्त्वको नाम सुल्फोराफेन हो । यो तत्त्वले क्यान्सर लाग्न नदिने मात्रै होइन, त्यसले क्यान्सरको उपचारलाई पनि प्रभावकारी बनाइदिने गर्छ । विशेष गरेर ब्रोकाउली प्रोस्टेटको क्यान्सर रोक्न र त्यसको उपचारमा धेरै प्रभावकारी देखिएको छ ।
यसमा हुने उक्त क्यान्सर प्रतिरोधी तत्त्व सुल्फोराफेनले प्रोस्टेट क्यान्सरको कोषहरुलाई मार्ने गरेको र उक्त रोगको विकासलाई सुस्त बनाउने गरेको पाइएको थियो । त्यसका साथसाथै, यस तत्त्वले क्यान्सरको उपचार पद्दति किमियोथेरापीको प्रभावकारितालाई पनि बढाइदिने गरेको फेला परेको थियो ।
प्रोगेरिया एउटा त्यस्तो दूर्लभ रोग हो, जसमा शरीर अति चाँचाँडो बुढो हुँदै जान्छ । यो रोग लागेको धेरैजसो रोगीहरु ३० वर्षभन्दा बढी बाँच्न सक्दैनन् । यो रोगको अझैसम्म उपचार पत्ता लागिसेको छैन । तर अध्ययनले के देखाएके छ भने ब्रोकाउलीमा पाइने तत्त्वहरुले यो रोगमा देखिने प्रोटिनसम्बन्धी खराबीहरुलाई कम गर्न सक्छ र त्यस रोगको विकासलाई सुस्त तुल्याइदिन सक्छ ।
हामीले हाम्रो खानामा नियमित रुपमा ब्रोकाउलीलाई समावेश गर्ने हो भने पाचन प्रणालीलाई सही ढंगले काम गर्न मद्दत पुग्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पाचनप्रणालीलाई स्वस्थ राख्न सबैभन्दा जरुरी चीज भनेकै हामीले खाने खानेकुराहरु फाइबरयुक्त हुन जरुरी छ । ब्रोकाउली त्यस्तो तरकारी हो, जसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ ।
त्यसैगरी, ब्रोकाउलीमा हुने विभिन्न तत्त्वहरुले हाम्रो पाचन प्रणालीमा असल व्याक्टेरियाहरुको बृद्धिमा पनि मद्दत पुर्याउँछ । विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छः नियमित रुपमा ब्रोकाउली खाने मानिसहरुको पाचनप्रणाली तुलनात्मक रुपमा बढी सही ढंगले काम गर्ने गरेको हुने गर्छ ।
मूलतः ब्रोकाउली भिटामीन के र सीको राम्रो स्रोत हो । त्यसैगरी, फोलेट ९फोलिक एसिड० पनि यसमा पाइन्छ । स्मरण रहोस्, भिटामीन के रगत जम्नको लागि अत्याश्यक तत्त्व हो भने यसले अन्य थुप्रै कामहरु पनि गर्ने गर्छ ।
स्वस्थ मस्तिष्क, दीर्घजवानी
स्वस्थ मुख, बलियो हड्डी
काँचो कि पकाएको खानेरु
ब्रोकाउली त्यस्तो खाना समूहमा पर्दछ, जुन काँचै वा पकाएर दुवै तरिकाले खान सकिन्छ । ब्रोकाउलीमा भएका जीवनदायी र स्वस्थकर तत्त्वहरुमध्ये कतिपय चाहिँ पकाउँदा नष्ट हुने भएकोले तुलनात्मक रुपमा पकाएको भन्दा काँचो खाँदा यसले बढी फाइदा गर्ने गर्छ । ब्रोकाउलीमा पाइने थुप्रै फाइदाजनक तत्त्वहरुमध्ये सुल्फोराफेन प्रमुख हो ।
यो तत्त्व चाहिँ पकाउँदा नष्ट हुने गर्छ भनी पछिल्ला केही अध्ययनहरुले देखाएको छ । यस अर्थमा पनि ब्रोकाउली पकाएको खानुभन्दा काँचो खानु नै उचित हुने देखिन्छ । काँचो खान नसक्ने व नरुचाउनेहरुले यसलाई हल्का उमालेर पनि खान सकिन्छ । रातो पाटीबाट